PressReader - Ilanga: 2017-09-11 - Zinconywa kanjani izigebengu ezinjengoChillies?
Zinconywa kanjani izigebengu ezinjengoChillies?
Ilanga - 2017-09-11 - Imibono -
ITHANDE ukusidida indaba yabantu baseMlaza nabanye nje baseNingizimu Afrika abebechaza njengeqhawe uSandile “Chillies” Bhengu obengcwatshwa ngoMgqibelo kuleli lokishi. UChillies njengoba ebedume kanjalo uSandile, uchazwa njengenkunzi yesigebengu ekudunweni kwezimoto.
Abantu baseNingizimu Afrika yibona kanye abahlale besola uhulumeni bethi ubanunusela ngezigebengu kwazise ziyaboshwa zisheshe zidedelwe kokunye zingaboshwa nhlobo - yibona futhi ababona ubuqhawe kuzona. Nawo kodwa uhulumeni, sibona uyinkinga ngokuthambisa isandla ezigebengwini, yingakho nje obhululu bakaChillies sebekhuluma yonke into besongela ngisho namaphoyisa.
Izigebengu bezisabisa ngokuntshontsha izimoto zabantu njengoba bekungcwatshwa uChillies, abantu bekunzima nokuba baye eMlaza ngoba besaba ukuthi izimoto zabo zizothathwa ngendluzula noma zebiwe yimigulukudu. Yilokhu-ke kuze kwaphuma amabutho ngamabutho amaphoyisa eyoqapha isimo.
Lokhu kwenza sizibuze ukuthi empeleni kanti abantu baseNingizimu Afrika yini abayifunayo uma bezobona izigebengu zingamaqhawe.
Kakuhlukile nokuthi uChillies uhlonishwe ngomngcwabo wombuso ngenxa yokungcwala kwamaphoyisa, kukhona nendiza yamasosha.
Ingakanani nje imali emoshwe wuhulumeni uqaphe izigilamkhuba ukuthi zingalelesi abantu njengoba bekungcwatshwa? Ukusuka kwendiza nje kukodwa kudle malini? Iningi labantu ebeligcwele kulo mngcwabo uzothola ukuthi lisuke emakhaya kungekho ngisho imali yesinkwa.
Kunokuba libhekane nohulumeni ukuze akhe amathuba emisebenzi, liqubula ingebhe ezikhulwini zikahulumeni - eholele ekubeni kuchithwe izimali.
Yinqwaba yamaphoyisa ezokhokhelwa imali yokusebenza isikhathi esengeziwe njengoba ebegcwele kulo mngcwabo. Lokhu kwenza sibone ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bayazikhetha izigebengu okumele ziboshwe noma zibulawe. kasisho ukuthi abantu mababulawe kodwa okusidida kakhulu wukubonakala kobuqhawe kuChillies.
Abanye bebethi ubeyisigebengu esihloniphayo futhi esingagcwelezeli abantu baselokishini laso. Lokho kakusho lutho, isigebengu yisigebengu nje. Uma sigcweleza abantu bakwamanye amalokishi noma sigila okungebona abebala laso, lokho kakusho ukuthi siyisigebengu esingcono.
Ngisho singahlonipha ingane encane, siyohlala siyisigebengu uma seba noma sithatha izinto zabanye abantu ngendlela ephambene nokulunga. Uma-ke uhulumeni uzowuhlaba inhlali izigebengu zesabisa amaphoyisa, kuyosho ukuthi izakhamizi zaseNingizimu Afrika zise-nkingeni enkulu ngoba abakwasidlodlo laba kabayona insimbi, nabo bazogcina becasha uma kuqhamuka izigebengu.
Phela kuyaziwa ukuthi umthetho ubuye uwaklinye amaphoyisa angakwazi ukubhekana nezingebengu ngendlela zona eziyiqonda kangcono - okuyindluzula. Nabantu bakuleli mabayeke ukuyishaya emuva bayishaye phambili ngobugebengu - bakhale ngezigebengu ezibahlalise lubhojozi kodwa kuthi uma amaphoyisa esebhekana nazo, kuphinde kube yibona abawasolayo.
Kakuhlukile nokuthi uChillies uhlonishwe ngomngcwabo kahulumeni ngenxa yokugcwala kwamaphoyisa, kukhona nendiza yamasosha. Ingakanani imali echithwe uhulumeni...